लकडाउन फेरि लम्ब्याउने तयारी | BBM WORLD TV
२३ वैशाख, काठमाडौं । कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन लम्ब्याउन संकेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा अहिले जारी लकडाउनलाई लम्ब्याउने वा जोखिमअनुसार क्षेत्रगत लकडाउन गर्ने विकल्पमा छलफल भएको छ । तर अहिले नै क्षेत्रगत लकडाउनमा जाने बेला भयो र भन्ने प्रश्न छलफलमा उठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले सरकारले अहिले लिएको बाटो नै ठीक भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । साथै २५ गतेपछि लकडाउन के हुन्छ भन्ने भोलि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा लकडाउनमा बसेको सोमबार ४२ दिन भयो । लकडाउनपछि धादिङका एक पुरुष र सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका आमा छोरामा संक्रमण भेटियो । उनीहरू निको भएर घर फर्किसके । नयाँ संक्रमित नभेटिएको २२ दिन भयो ।
विदेशबाट संक्रमण बोकेर मानिसहरू काठमाडौं आउने सम्भावना पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान चैत ९ गतेदेखि नै बन्द छ। जेठ ३ गतेसम्म उडान खुल्ने सम्भावना पनि छैन ।
त्यसो हो भने काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउन किन खुकुलो नबनाउने ? सर्वसाधारण मात्र होइन, जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि यही प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूमध्ये एक हुन् डा. समीरमणि दीक्षित । उनी भन्छन्, ‘अरू केही नगर्ने हो भने अर्को ६ हप्ता लकडाउन गरे पनि अवस्था त्यही रहन्छ । अनि कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने ?’
४२ दिन लामो लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । दीर्घरोगीहरूको नियमित उपचार रोकिएको छ । खोपलगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू समस्यामा परेका छन् ।
‘यो सबैले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेको छ र कोभिड-१९ लेभन्दा अरू रोगका कारण धेरै मानिसहरू मर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनी भन्छन् ।
त्यसैले, अब काठमाडौं उपत्यकाको लकडाउन मोडल परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको राय छ । अहिले नै सार्वजनिक यातायात, स्कुल, सिनेमा हलजस्ता भिडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न सकिँदैन’ डा. दीक्षित भन्छन्, ‘तर, कृषि उत्पादन, ढुवानी, साना पसल, निर्माण क्षेत्रहरूलाई क्रमशः खुला गर्न सकिन्छ ।’
नेता र मन्त्रीहरूले मानिसलाई काठमाडौं बाहिर पठाउने र बाहिर रहेकालाई ल्याउने गरेर लकडाउनको सिद्धान्त तोडेको उनीहरूको गुनासो थियो । अहिले पनि लुकिछिपी उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको पनि उनीहरूले बताए ।
काठमाडौँमा फेरी एसिड आक्रमण, आफ्नै बाबुले छोरी र पत्निमाथी गरे प्रहार